Iqiniso elisha le-COVID Lapho undiza e-US yiminyaka engama-20 esejele laseFederal lokudunwa kwemoto noma ukwephula iMask.
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Iqiniso elisha le-COVID Lapho undiza e-US yiminyaka engama-20 esejele laseFederal lokudunwa kwemoto noma ukwephula iMask.
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukwahluka kwe-COVID-19 Delta - Mask Up America!
Ngokwe-FAA, imibiko yabagibeli engalawuleki engu-4,385 3,199 yafakwa kungakapheli unyaka e-United States. Kulokhu, i-20 yimibiko yezehlakalo ezihlobene nemask. Ukuphazamisa abasebenzi bezindiza kuyicala elibucayi, kepha kufanele yini kube yicala lomthetho ngaphansi kwePatriot Act ngejele kuze kube yiminyaka engama-XNUMX? UMongameli Wamalungelo WamaFlaya aseMelika uPaul Hudson akacabangi kanjalo.
Khohlwa ukuqhela kwezenhlalo lapho ugibela indiza yasekhaya e-United States.
Abagibeli abaphikisana nemithetho yamanje futhi bememeza ngenkathi besendizeni bangashushiswa ngaphansi kwePartriot Act ebhekene neminyaka engama-20 ejele lase federal.
Abasebenza ezindizeni zaseMelika baqeqeshwa ngabantu abafanayo abaqeqesha onogada basejele - hhayi umzamo omkhulu wokwehliswa.
Isibhakabhaka esinobungane e-United States kungenzeka singabi nabungane njengasezikhathini ezinhle zakudala ze-PAN AM.
I-Federal Air Marshals ifundisa abagibeli bezindiza ukuthi babhekane kanjani nobungozi obandayo babagibeli abaxabana futhi banodlame, imvamisa ngenxa yemithetho yokufihla ubuso.
Imikhawulo evame ukuphoqelelwa ezindizeni zamazwe omhlaba, kufaka phakathi izihlalo eziphakathi ezivulekile, ibanga lomphakathi ezindizeni, kanye nemithetho yokugoma, akuvamile ukuthi isebenze ezindizeni zasekhaya zase-US.
Abagibeli abaningi basekhaya e-United States bayenqaba ukulandela imithetho yokugqoka imaski ngenxa yezepolitiki, ezenkolo, kanye nezinye ngenxa yezizathu zempilo. Lokhu kudala inqwaba yezehlakalo, ezibikwe kwi-Federal Aviation Authority (FAA)
Ukundiza ngeminyaka ye-COVID-19 kuyacindezela kubagibeli nabasebenzi, futhi kuholele ezigamekweni ezihlobene nomaskhi ezingama-3,199 ezibikwe kwi-FAA. Uma kubhekwa kuphela imibiko yabagibeli engalawuleki engu-4,385 XNUMX efayilisiwe ngonyaka, le yinombolo ephezulu kakhulu.
Ukwenza abagibeli balawulwe, kuxoxwe ngakho eNdlini ukujezisa izehlakalo ezihlobene nabagibeli ngobunzima obufanayo nobokuthumba. I-Patriot Act yenziwa e-United States ukuphendula ukuhlaselwa kwabaphekula, hhayi ukuphendula umgibeli okhalazayo. Ukwephula iPatriot Act kuza nesigwebo seminyaka engama-20 ejele.
Paul Hudson, uMongameli we Amalungelo Amaflaya, bekulokhu ummeli obephumela obala yamalungelo abagibeli futhi ithi kwanele.
Ukuphawula kukaFlyersRights.org kwiKomidi Elincane Lezindiza Lokukhula Kwenani Lezehlakalo Zezindiza
Ukwanda kwamuva nje kwezehlakalo ezinodlame ekuhambeni ngezindiza kuyinkinga enkulu edinga izixazululo. Ukulalelwa kwekomidi elincane kuzozuza ngokuzwa umbono womgibeli. IFlyersRights.org ifake isicelo sokwenza umthetho eMnyangweni wezokuThutha ngo-Agasti 2020 wokugunyaza ukugqoka imaski ohambweni lomoya. IFlyersRights.org ibe yinhlangano ehamba phambili ekhuthaza izindlela zokunciphisa i-COVID zokwenza ukuhamba ngezindiza kuphephe.
Ngokuya ngemininingwane yakamuva ye-FAA, izehlakalo ezibikiwe ezihlobene nesifihla zingama-73% azo zonke izehlakalo ezibikwe ngabasebenzi ngonyaka ka-2021. Ngasikhathi sinye, izehlakalo ezingahlobene nemaski ziphansi, kanti i-FAA iliphindaphinde kabili inani lezimo zayo uphenyo. IFlyersRights.org iphakamisa lezi zixazululo ezilandelayo ukunciphisa inani lokuphazamiseka okuhlobene nemaski ezindizeni:
Sebenzisa uhlelo lwamakhadi aphuzi lapho umgibeli enikezwa isexwayiso esibhaliwe kanye namandla okuthumela isikhalazo esibhaliwe kumshayeli wendiza noma enkampanini yezindiza njengendlela yokwehla.
Qinisekisa ukuthi abagibeli bezindiza ngokwabo bayayithobela futhi bayilandele njalo imithetho yemaski.
Vumela ukukhululeka okukhulu kokuthola okusemthethweni kwezempilo nokukhubazeka ngaphandle komthetho wobuso.
Sebenzisa izinyathelo ezinkulu zokunciphisa ze-COVID, kufaka phakathi ukuhleleka komphakathi kanye nokuhlolwa kwezinga lokushisa. Ukuhlukaniswa komphakathi kumele kuphoqelelwe hhayi endizeni kuphela, kepha esangweni, ngesikhathi sokugibela, nasezindaweni zokuphepha zokuphepha.
Linganisa kabusha izandiso zokugunyazwa kwe-TSA ngesaziso somphakathi nenqubo yokuphawula.
Izindiza zithwalise kanzima abagibeli ezindizeni ezimbalwa ngaphandle kokuphazanyiswa komphakathi, akukho ukuvinjelwa kwezihlalo eziphakathi, imingcele yamandla, ukubhekwa kwamazinga okushisa, nokuhlolwa kwe-COVID. Ngenkathi abanye abagibeli bephikisana nezifihla-buso ngezizathu zezepolitiki, abanye babona ukungabi bikho kwezinye izindlela zokuvikela ukuphepha ezithathwa yizindiza (ukuqhela kwezenhlalo, ukuvimba izihlalo eziphakathi, ukuhlolwa kwamazinga okushisa) kanye nokungabi bikho kokuqiniswa okungaguquguquki kubagibeli nabasebenza ezindizeni.
Ukushushiswa kwebhethri kuyadingeka lapho lezi zigameko ziba nodlame. Kodwa-ke, kungaba ukukhuphuka okukhulu kanye nokwephulwa okukhulu kwenkululeko yomphakathi ukunxenxa ubugebengu bePatriot Act "ukuphazamiseka kwamalungu abasebenzi bezindiza kanye nabagibeli bezindiza" okuhloselwe abaduni kanye nokusongela umgibeli oneminyaka engamashumi amabili ejele.
IFlyersRights.org ikhuthaze umthetho wobuso kanye nezinye izindlela zezempilo ukuvikela abagibeli namalungu abasebenzi. Ngenkathi iningi labasebenza ezindizeni liphoqelela umthetho we-mask ngokusemandleni abo ngaphansi kwezimo, abaningi abasebenza ezindizeni abazami ukuphoqelelwa futhi ngokwabo bephula umthetho we-mask.
I-FlyersRights.org ibingasho ukuthi izenzo zedlanzana lezisebenzi ezindiza kulo lonke iqembu. Kodwa-ke, njengoba kufanele kuthathwe izinyathelo zokuphoqelela abagibeli abenqaba ukugqoka isifihla-buso, kufanele kuthathwe izinyathelo ngalaba bantu abasebenza ezindizeni abaphula umthetho wobuso noma abangenzi mizamo yokuphoqelela lo mthetho. Lokhu ngeke kusize kuphela ekunqandeni inqwaba yezehlakalo ezinyantisayo zabagibeli, kepha futhi kubalulekile empilweni eqhubekayo yabo bonke abagibeli nabasebenza ezindizeni kulo lonke lolu bhubhane.